Ise Ọnọdụ Bara Uru na Ahịa ọ bụla | Martech Zone
N’oge mbụ m na-ebi ndụ, ọ tụrụ m n’anya mgbe niile na mpekọrịta nkwukọrịta dị n’etiti ndị mepụtara ngwaahịa a, na ndị na - ere ma na-ere ha. N'ịbụ onye na-eche echiche na onye na-edozi nsogbu ọha na eze, m ga-anwa mgbe niile ịchọta ụzọ iji dozie ọdịiche dị n'etiti ndị na-eme ya na ndị na-ere ahịa. Mgbe ụfọdụ mgbalị ndị a gara nke ọma, mgbe ụfọdụ ọ nweghị. Ma mgbe m na-agbalị idozi ihe dị n'ime ụlọ ọrụ m na-arụrụ ọrụ, sụrụ m ngọngọ maka ihe m kwenyere na ọ bụ eziokwu ụwa niile gbasara ịme ngwaahịa na mmepe ngwaahịa.
Eziokwu mbu, Mgbado Anya, kọwara Ebe a.
Eziokwu nke abuo, Ọnọdụ otu, bụ otu ụlọ ọrụ si asọmpi n'ọma ahịa, na etu ọnọdụ n'ọma ahịa ga-esi egosi ihe ịga nke ọma. Ihe na - esote bụ nkọwa dị mkpirikpi banyere echiche a, yana ihe atụ nke ọnọdụ ọ bụla. (edemede ode akwụkwọ: Ekwenyere m na ntọala nke eziokwu a sitere na akwụkwọ a gụrụ na mmepe onwe m, yabụ ọ bụrụ na nke a mara nke ọma, nke ọ bụrụ na ị bụ onye edemede akwụkwọ a, biko mee ka m mara. ịchọta ebe mbụ m dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ)
Microsoft, ebe ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọtụtụ mba, na-asọmpi ebe niile. N'ọtụtụ ngwaahịa ha, ọ bụghị naanị na ha nwere òkè n'ahịa, kama ha nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ahịa niile. Ma na mpaghara ụfọdụ, ha bụ nke abụọ, atọ, ma ọ bụ nke anọ dị anya. Gịnị kpatara nke a? Agbanyeghi na azịza zuru oke bụ nke dị ogologo na teknụzụ, azịza ndị ahịa na-adịkarị mfe: edemede, ọ bụghị akara, na-akọwa ọganiihu n'ọma ahịa.
Otu, akọwapụtara ya, ihe onye ọrụ gị ga - eme ka ngwaahịa gị bụrụ. Ọ bụrụ na ajụrụ m gị ụdị ngwaahịa Windows XP bụ, ị ga-akacha agwa m? Sistemụ arụmọrụ?. Yabụ Sistemụ nrụọrụ ga-abụ udi maka ngwaahịa a, Microsoft ga-achịkwa ngalaba ahụ n'ụzọ doro anya.
Mana mgbe m gosipụtara gị Zune ma jụọ maka otu a, ị nwere ike ịgwa m MP3 Player. O doro anya na Microsoft na-efunahụ ụdị a na Apple. Kedu ihe kpatara Microsoft ga - eji họrọ ịsọ mpi ebe a, mgbe Apple na - achịkwa? Ọfọn, ọ na-apụta na enwere ego iji bụrụ ezigbo ọnụọgụ abụọ ọbụlagodi na ọnụọgụ ahụ bụ nnukwu. N'ezie enwere ọnọdụ ise dị iche iche na otu ụdị bara uru, ọ bụrụ na ịmara otu esi eji ha.
Ọnọdụ Ọnọdụ Ise Na-aba Uru
Ọnọdụ ise bara uru maka ụdị ahịa ọ bụla bụ Onye isi ahia, Nke Abụọ, Ihe Ọzọ, Bolọ ahịa, Na Onye Nduzi ohuru. Na nke ọ bụla n'ọnọdụ ndị a ọ ga-ekwe omume ịme ego, ọ ga-ekwe omume itolite. Mana ọ bụ ihe na-esighị ike ịkwaga site n'otu ọnọdụ gaa n'ọzọ na-enweghị enyemaka mpụga.
Na onyonyo dị n'elu, a na-adọta ọnọdụ ọ bụla na ọnọdụ oke ahịa ya na oke ya. Dịka ị nwere ike ịchọpụta, nha na-adị obere obere ngwa ngwa. Ya mere, gịnị mere na-esote na-agaghị ekwe omume ịkwaga? Maka na mgbe ọnọdụ nke ọ bụla pere mpe karịa nke dị n’ihu ya, ego a chọrọ iji gbanwee ọnọdụ karịrị uru bara uru site na ịgbanwe.
Ugbu a, ka anyị lelee ọnọdụ nke ọ bụla iche iche, iji hụ otu ọnọdụ ha si dị iche. Maka mmega a, anyị nwere ike iji ụdị cola, n'ihi na ọtụtụ mmadụ ghọtara ya nke ọma.
Ọnọdụ Otu: Onye Nduzi Ahia
N'ezie, Coke bụ onye ndu. Ha nọ ebe niile, na uru ha bara bụ akụkọ mgbe ochie. Ha bụụrụ anyị ezigbo onye ndu. Na n'ihi na ha nwere asọmpi siri ike na Pepsi, ha enweghị ike inwe oke ahịa. Yabụ naanị nhọrọ ha ga - etolite bụ ịbanye ahịa ọhụrụ. N'ihi gịnị? Maka na ọ dị ọnụ ala karịa imeghe nkesa China karịa ị nweta Pepsi na Safeway.
Ọnọdụ nke abụọ: Nke abụọ
Pepsi dị ike nke abụọ. Ha dịkwa ebe niile, echekwara na ọ bụ naanị ọzọ na Coke. Yabụ kedu ka ha si eto? Inweta òkè site na Coke dị oke ọnụ ma sie ike, mana ịbanye China otu afọ mgbe coke dị mfe ma dị ọnụ ala. Ha weputara onu ogugu Coke.
Ọnọdụ atọ: Nhọrọ
N'ebe ụfọdụ nke mba RC Cola bụ Nhọrọ ọzọ. Ma ha anọghị ebe niile, ha enweghịkwa ikike ịzụ ahịa nnukwu mmadụ abụọ nwere. Yabụ kedu ka ha si eto? Mpaghara site na mpaghara. Ha lekwasịrị anya kpọmkwem ọwa ebe a pụrụ ịhụ ha dị ka mpaghara ma ọ bụ ihe pụrụ iche ma too? Site n'ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ?.
Ọnọdụ nke anọ: Boutique
Jones soda bụ nnukwu ụlọ ahịa. Ha na-ere kola, mana Jones pere aka banyere kola, na ihe kariri ahuhu kola. Cola na-abata na karama iko na shuga dị ọcha, ihe osise ọdịnala na akara ahụ, na ọnụahịa dị elu. Nke a doro anya na ọ bụghị isi asọmpi na ndị isi. Ma ha bara uru, ma nwee ndị na-eguzosi ike n'ihe. N'ihi gịnị? Maka na ha na-ebubata otu ngalaba pere mpe nke ndị na-ere ahịa cola.
Ọnọdụ ise: Onye Nduzi Ọhụrụ (NCL)
Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpaghasị otu edemede, olee otu ị ga-esi mee ya? Onwe m, m ga-ajụ ndị amamihe ahịa n'azụ Red Bull. Ha wuru ala eze dum na-agwa onye ọ bụla na ha abụghị cola, kama ume. N'ezie Red Bull enweghị ike ịlụ ọgụ na Coke mgbe ha malitere. Mana ha nwere ike ịgwa ndị mmadụ ụdị ha, Energy, ka mma. Nke ahụ ọ bụghị asọmpi na Cola? Ha jiri udi nke ozo ha abanye na ulo ahia nke coke na-emeri. Ha mere ya na-enweghị asọmpi Coke ma ọ bụ Pepsi n'isi.
Akwa, yabụ gịnị kpatara okwu a?
Ezigbo ajụjụ. Azịza ya na-agbadata na nke a: ọ bụrụ na ịmara ọkwa gị, ị maara etu esi asọ mpi. Ọ bụrụ na ịmaghị ebe ị kwụ, o yikarịrị ka a ga-erere gị azụmaahịa, azụmaahịa, ma ọ bụ atụmatụ uto nke ga-emebi nnukwu ego na-anwa ịkwaga gị ebe ị na-enweghị ike ijide. Nke ka mkpa bụ na, mgbe ị matara ọnọdụ gị, ị ga - azụlite atụmatụ azụmaahịa na azụmaahịa na - ejikọ ọnọdụ gị bara uru, wee nye ọnụego dị elu.
Tags: inyeahia ọnọdụOnye Nduzi ohuruIhe ỌzọBolọ ahịaOnye isi ahiaNke Abụọ
Grant Lange bu otu n’ime ndi bidoro Akaebe Studio, onu ogugu na ngwa ahia. Ọ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ma ndị ukwu ma ndị obere iji mepụta atụmatụ dị mma na atụmatụ mmepe.
Feb 23, 2010 n’elekere 10:59 nke abali
Mgbe niile mma iji nyochaa na m n'ezie na-amasị ngosi - Ọma mere na o doro anya na m a Boutique 🙂
Feb 24, 2010 na 1:54 PM
Otu na-akpali ighikota bụ na – dabere na ihe asịwo na-achọ – i nwere ike ịbụ na dị iche iche ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, Jones bụ onye ọkpụkpọ kachasị na boutique / craft / premium sodas, mana o doro anya na boutique mgbe a na-ele ya anya megide coke.
Nke ahụ bụ ihe na-eme ka ọrụ anyị na-atọ ụtọ.